March 3, 2020 - CeleLove
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအား တာဝန်ချိန် နှောင့်ယှက်စော်ကားရုံတင်မက ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး
March 3, 2020 CeleLove 0
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအား တာဝန်ချိန် နှောင့်ယှက်စော်ကားရုံတင်မက ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး မြင်လို့မှမကောင်းဗျာ ဘေးက နေတဲ့သူတောင် ဒေါသ အလိပ်လိပ်ထွက်မိတယ်ဗျာ …. သို့… လေးစားအပ်ပါသော ရဲချုပ်ကြီးနှင့်တကွလူကြီးများခင်ဗျာ ပြည်သူဝန်ထမ်းအားတာဝန်ချိန် နှောက်ယှက် စော်ကားရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်သူအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအား အရေးယူပေးပါရန်နှင့် ထိုဖြစ်စဉ်မျိုးသည် ရဲတပ်ဖွဲ့အား မလေးမစားပြုသည့်အပြင် မောက်မာရိုင်းစိုင်းလွန်းသဖြင့် […]
စားရန်မလို ဆံပင်ဆေးဆိုးရန်မလို ခံတွင်းနံ့လုံးဝမနံတဲ့ ဆေးနည်း
စားရန်မလို ဆံပင်ဆေးဆိုးရန်မလို ခံတွင်းနံ့လုံးဝမနံတဲ့ ဆေးနည်း ပေါင်းတည်မြို့ပုတီးကုန်းလမ်းမှကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဉီးစံချိန်၏ ဆေးနည်းလေးပါ …. ။ ဝမ်းနှတ်ဆေးစားရန်မလို ဆံပင်ဆေးဆိုးရန်မလို ခံတွင်းနံ့လုံးဝမနံပါဘူး … ။ ဆေးနည်းကတော့ ကွမ်းရွက်နှင့်ဆားပုံပါအတိုင်းစား ထမင်း စားပြီးတိုင်းစားပါ …. ။ ခံတွင်းနံ့လုံးဝမနံ စေရန် နောက်တစ်နည်းရှိသေးတယ် …. […]
အချစ်ကို ဘဝနဲ့ရင်းပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တယ် ဖြစ်ရလေ ညီမလေးရယ်…
အချစ်ကို ဘဝနဲ့ရင်းပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တယ် ဖြစ်ရလေ ညီမလေးရယ်… အချစ်ကို ဘဝနဲ့ရင်းပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တယ် ဖြစ်ရလေ ညီမလေးရယ်… မိဘကိုလုပ်ကျွေးမဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုထားပီး တိုင်းတစ်ပါးကို ရောက်ခဲ့တယ် အချစ်တစ်ခုနဲ့ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ အရမ်းမှားတယ် အချစ်အတွက်စွန့်စားတာကိုတော့ ဂုဏ်ယူပါတယ် …. ။ ဒါပေမဲ့ ညီမလေးဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်ချစ်သူပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ […]
တော်တော် လူမဆန်တဲ့ ကောင်ပါ မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ကို မလာခဲ့ဘူး (သူနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လည်း ရှိနေတယ်) (ရုပ်သံ)
တော်တော် လူမဆန်တဲ့ ကောင်ပါ မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ကို မလာခဲ့ဘူး (သူနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လည်း ရှိနေတယ်) (ရုပ်သံ) တော်တော် လူမဆန်တဲ့ ကောင်ပါ မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ကို မလာခဲ့ဘူး (သူနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လည်း ရှိနေတယ်)တဲ့လေ … ။ တော်တော်လူမဆန်တဲ့ ကောင်ပါ မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်အချိန်ကိုရောက်မလာပါဘူး […]